Famakafakana ny Baiboly - Wikipedia
Ny famakafakana ny Baiboly dia famakafakan-dahatsoratra fanao indrindra amin' ny lahatsoratra masina izay ampiharina amin' ny Baiboly mba hahazoana ny hevitra marina tian' ny mpanoratra ny Baiboly hampitaina. Atao hoe mpamakafaka ny olona manam-pahaizana amin' izany asa famakafalana izany. Tsy ny Kristiana ihany no manao famakafakana ny Baiboly fa ny Jiosy koa izay efa nanao izany taloha ela.
Tsy sahala amin' ny lahatsoratry ny fivavahana hafa ny Baiboly fa efa nanaovan' ny manampahaizana tsikera sy fanitsiana. Ireo fitsikerana ireo dia vokatry ny fiheveran' ny Jiosy sy ny Kristiana maro fa ny fivavahana dia vokatry ny zava-nitranga ara-tantara voafaritra mazava tsara. Na dia voasoratr' olon-tsy fantatra ny ampahany be amin' ny lahatsoratry ny Baiboly dia noheverina fa nosoratan' olona tokony azo tondroina na faritana mazava izy ireo. Ny lahatsoratry ny Baiboly dia tsy noheverina ho nampidinina mivantana avy any an-danitra, tsy tahaka ny lahatsoratry ny boky hafa toy ny an' ny Silamo sy ny an' ny Hindoa sy ny hafa koa. Tsy tokana anefa ny fomba fiasa amin' ny fanaovana famakafakana ny Baiboly sady nisy fivoarana izany hatramin' ny nisiany ka mandraka ankehitriny.
1 Ny famakafakana natao amin' ny Baiboly jiosy
1.1 Ny karazana famakafakana nataon' ny Jiosy
2 Ny famakafakana atao amin'ny Baiboly kristiana
2.1 Ny fanombohan' ny fanaovana famakafakana sy tsikera
2.2 Ireo karazan-tsikera
2.2.1 Ny fitsikeran-dahatsoratra
2.2.2 Ny fitsikeran-doharano
2.2.3 Ny tsikera ara-tantara sy ara-kaisoratra
2.2.4 Ny fitsikerana endri-dahatsoratra
2.2.5 Ny fitsikeram-pampandriana an-tsoratra
2.2.6 Ny fitsikeran-drafi-pitantarana sy fandaharan-teny
Ny famakafakana natao amin' ny Baiboly jiosy[hanova | hanova ny fango]
Ny manampahaizana jiosy sy kristiana voalohany momba ny Tanakh sy ny Baiboly dia niezaka nampifanaraka ny tsy firindrana nataon' ireo olona mpanoratra masina amin' ny fieritreretany fa vokatry ny fitsilovana avy amin' Andriamanitra ny Tanakh, na tamin' ny alalan' ny fanaovan' Andriamanitra soratononina izany, na tamin'ny alalan' ny nofy, na tamin' ny alalan' ny fahitana, na tamin' ny fomba ankolaka hafa.
Ny karazana famakafakana nataon' ny Jiosy[hanova | hanova ny fango]
Ny raby voalohany tao amin' ny tao Palestina sy tany Babilôna dia efa nanao asa famakafakana izay vaotahiry ao amin' ny Talmoda. Ny Talmoda dia ahitana ireo ezaka fandrindrana ireo zava-dazaina maro ao amin' ny Tanakh, nampifanaraka ny Tanakh sy ny fivavahana jiosy, ka heverina fa fivoasana avy amin' ny tsindrimandry avy amin' Andriamanitra momba ny Tanakh izany. Mba hahazoana ny firindrana dia maro ireo endri-panohanan-kevitra nampiasain' ny raby izay ahitana fanazavana saro-takarina sy apetrapetraka hoazy.
I Filona avy any Aleksandria
Tao amin' ny tontolo jiosy nandray ny kolontsaina grika tany am-pielezana dia nahitana an' i Filona avy any Aleksandria izay niezaka fatratra hanamarinana ny fifanarahan' ny Tanakh amin' ny fomba fijery an' izao tontolo izao nataon' ireo filôzôfa sy manampahaizana grika. Mba hahatanteraka izany fandrindrana izany dia ny fanakaran-kevitra am-panoharana no nataony.
Ny raby mpanao heviteny dia fantatra amin' ny anarana hebreo hoe mefarshim ("mpanao heviteny"). Maro ny sehatra anaovana famakafakana lahatsoratra nataon' ny Jiosy ôrtôdôksa:
Ny Targoma dia fandikana avy amin' ny hasin-dahatsoratra (hebreo: פרשה / parasha) amin' ny fiteny arameana, izay hamarinina amin' ny fanaovana heviteny isankarazany. Izany dia fanao mahazatra tao amin' ny sinagôga tany Galilea tamin' ny taonjato voalohany. Tsy toy izany no nataon' ireo Jiosy tany Aleksandria izay nampiditra ao amin' ny lahatsoratra anaovany fanadihadiana ny vokatry ny fanadihadiana ataony.
Ny Midrasa dia teny mahafaobe anondroana ny ady hevitra sy fanaovana heviteny sy ny fanazavana ary indraindray koa ny fikarohana momba ny lahatsoratry ny Baiboly hebreo. Amin' ny heviny malalaka dia karazana haisoratra ny Midrasa, dia ny fitantarana itorian-teny. Manazava sy manao heviteny kokoa izy fa tsy tena mitady ny loharanon' ny lahatsotratra. Ireo fehintsoratra maro mifandray amin' ny lalàna dia nanaovana fanazavana momba ny rtranga fampiharana an' izany.
Ny Halakà dia fanazavana ny lalàna voasoratra (na Torah voasoratra).
Ny Hagadà dia anaovana heviteny momba ny fitantarana tsy mifandray amin' ny lalàna, ka miteraka fitantarana vaovao indray.
Ny Mikrà dia fanaovana nandalinana manaraka ny lalànan' ny saina ny soratra atao hoe "Mpaminany" (hebreo: נְבִיאִים / Neviim) sy atao hoe "Soratra" (hebreo: כְּתוּבִים‎ / Ketuvim).
Ny Masora dia mifa nakaiky amin' ny tsikera ara-dalatsoratra amin' ny fifantohany manokana amin' ny fitsipiteny sy ny fahatsaran' ny dika mitovy sy amin' ny loharano.
Ny Gemarà, izay tapany faharoa amin' ny fizarana lehibe roan' ny Talmoda, dia fanaovana heviteny ny tapany voalohany, dia ny Misnà, na fanangonana ny lalàn' Andriamanitra araka ny nanisan' ny jodaisma rabinika azy.
Ny Talmoda, izay mamondrona ny Misnà (ireo lalàna) sy ny Gemarà (ny hevitenin' ny lalàna) dia anaovan' ny Jiosy fanadihadiana sy famakafakana lalina. Araka izany, ny famakafakana ny Baiboly natao teo amin' ny jodaisma dia tsy nijanona tamin' ny fampandriana an-tsoratra ny Talmoda fa nitohy nandritra ny Andro Antenatenany sy tamin' ny Andron' ny fifohazan-tsaina.
Ny famakafakana atao amin'ny Baiboly kristiana[hanova | hanova ny fango]
Ny ankamaroan'ny Aban'ny Fiangonana dia nanohy izany fomba fiasan' i Filona izany. Resy lahatra izy ireo fa ny tena hevitry ny Testamenta Taloha dia izay nomena azy avy ao amin' ny Testamenta Vaovao sy ny fivoasana nataon' ireo Kristiana taty aorian' izany. Ny mpanao fivoasana ny Testamenta Vaovao voalohany dia nihevitra fa boky kristiana ny Testamenta Taloha ka izay rehetra voalaza ao dia tsy misy heviny raha tsy heverina ho tandindona na fambara mialoha ny zavatra tanteraka aty aoriana ao amin' i Kristy sy eo amin' ny Fiangonana.
Amin' izao fotoana izao dia maro ireo mpanao heviteny kristiana izay manakatra ny tian' ny Testamenta Taloha hambara amin' ny fampifandraisana azy amin' ny Fiangonana, sahala amin' ny ataon' ny Katolika tamin' ny Kônsily Vatikàna II amin' ny ampahany amin' ny fehin-keviny momba ny Soratra Masina. Niteraka tsy fifanarahana tamin' ny famakafakana ara-tantara aman-tsikera izany, satria ity farany dia iheverana ny Baiboly ho boky nosoratan' olombelona toy ny boky rehetra sady novolavolaina tamin' ny fomba fanoratra sy fifanarahana ara-kaisoratra tamin' ny vanimpotoana nanoratana azy.
Ny fanombohan' ny fanaovana famakafakana sy tsikera[hanova | hanova ny fango]
Nisy ny andrana fanaovana famakafakana ara-tantara aman-tsikera nataon' olona tamin' ny Andro Taloha. Na dia ny fivoasana ara-panoharana no nanjaka, nisy ny mpanao heviteny nilaza fa misy fomba tsara kokoa azo anamarinana ny fanilovana (na tsindrimandry) avy amin' Andrimanitra ny amin' ny lahatsoratra iray, raha ampitahaina amin'ny filazana fa nataon' Andriamanitra soratononina tamin' olona izany. Ny heviteny ara-panoharana nataon' i Filona avy any Aleksandria, raha ny marina, dia nentanin' ny faharesen-dahany fa misy andalana ao amin' ny Soratra Masina izay tsy mety ho marina ara-bakiteny. Ny fiaraha-miasa eo amin' Andriamanitra sy ny olombelona teo amin' ny famokarana ny Soratra Masina dia afaka niseho tamin' ny endrika saro-takarina kokoa noho izay aroson' i Filona, dia ny fanambaràna amin'ny alalan' ny fitoeran' Andriamanitra ao amin' ny olona sahala amin' ireo mpilaza faminaniana grika.
I Aogostino avy any Hipo
Tao amin' ny Kristiana dia i Aogostino avy any Hipo, ao amin' ny heviteny nataony momba ny hevitra ara-bakitenin' ny Bokin'ny Genesisy (na Jenezy) (De Genesi ad Litteram), dia nahatsapa tsara ny toa fifanipahan' ny fomba fijery ara-tsiansa momba an' izao tontolo izao sy ny an' ny mpanoratra masina. Izany no nahatsapany fa ilaina ny hanakarana ny hevitry ny lahatsoratry ny Baiboly amim-pahamalinana sy aman-tsikera. Tany Atsinanana dia fahasahiana bebe noho izany ny natoan' i Teôdôrôsy avy any Antiôkia izay nanavaka ny "fanahin' ny faminaniana" (izany hoe ny fanambaràna mivantana), izay nahazoana ny ampahany lehibe indrindra amin' ny lahatsorary ny Baiboly, sy ny "fanahin' ny fahendrena" izay nanako tao amin' ny mpanoratra masina (sahala amin' ny Bokin' ny Mpitoriteny) izay nisahirana amin' ny olana momba ny fiheveran' ny olona sy ny fijerena ny zava-misy araka ny fomban' olobelona tanteraka.
I Baruch Spinoza
Na dia teo aza ireo ezaka ireo sy ny hafa mitovitovy amin' ireo dia tamin' ny taonjaton' ny Fahazavana (taonjato faha-17 hatramin' ny faha-18) no nandalinana amim-pitsikerana ny Baiboly. Ny Fanavaozam-piangonana prôtestanta dia namelona indray ny fandalinana ny Baiboly taorian' ny taonjato maro tsy niraharahana izany, ary ireo fomba fiasa vaovao novolavolaina hanaovana fandalinana ara-tantara sy ara-kaisoratra nandritra izany fotoana izany dia nampiharina tamin' ny lahatsoratry ny Baiboly. Isan' ireo mpanao tsikera voalohany ireo i Thomas Hobbes sy i Baruch Spinoza ary i Richard Simon.
Ireo karazan-tsikera[hanova | hanova ny fango]
Na iza na iza manomboka manao fanadihadiana ny lahatsoratry ny Baiboly dia tsy maintsy manao izay hahafantarana fa izany lahatsoratra izany, araka ny endrika nampitana azy, dia tokony ho marina araka izay azo atao. Na tamin' ny vanimpotona talohan' ny kristianisma dia nifanehatra tamin' ny lahatsoratra dikan-teny ny mpanao tsikera sady nahatsapa ny tokony hiverenanana amin' ny dikan-teny tranainy indrindra araka izay azo atao mba hamaritana ny hevitry ny lahatsoratra tany amboalohany. Ny mpanavao fiangonana prôtestanta no nanome alalana ny hahafahan' ny olon-tsotra mamaky ny Baiboly ka nahatonga ny mpandika teny tamin' ny taonjato faha-16 sy faha-17 hikaroka ny lahatsoratra izay ahafahany mamokatra dikan-teny faran'izay tsara araka izay azo atao.
Ny fitsikeran-dahatsoratra[hanova | hanova ny fango]
I Johann Jakob Griesbach (1745–1812)
Ny fitsikeran-dahatsoratra dia mila ny paleôgrafia sy ny epigrafia hanampy azy. Sampan' ny filôlôjia ny tsikera lahatsoratra, dia ny filôlôjia izay mandalina ny dika mitovin' ireo soratanam-piraketan' ireo asa soratra tamin' ny Andro Taloha na tamin' ny Andro Antenatenany mba hamokarana lahatsoratra manakaiky kokoa ny "lahasoratra fototra" araka izay azo atao. Izany "lahasoratra fototra" tsy ananana fa tombantombana izany no atao hoe urtext amin' ny teny alemàna. Ireo mpandalina ny Baiboly tamin' ny taonjato faha-19 dia nihevitra ny ho afaka mahita izany lahatsoratra voalohany izany nefa mety tsy misy velively izany. Izany lahatsoratra izany dia efa niharan' ny fiovana sy fanovana tamin' ny dingana rehetra nandraiketana azy an-tsoratra alohan' ny nanpitana azy sady ny horonan-tsoratra dia tsy azo tahirizina mihoatra ny dimampolo taona any ho any amin' ny toerana mando ary mora potika koa amin' ny toerana maina.
Talohan' ny nahitana ny fanontam-pirinty dia nadika tamin' ny tanana ny lahatsoratra. Isaky ny dika soratry ny soratanam-piraketana dia misy fahadisoana mety tafiditra. Ny fahasarotan' ny fitsikerana lahatsoratra dia vokatry ny fahasarotan' ny fanavahana isaky ny "leksiona" (famakian-teny isanisany) ny fanova avy amin' ilay teny fototra na koa aza ny lahatsoratra misy diso. Araka izany, ny anjara asan' ny fitsikerana lahatsoratra dia ny fahafantarana ireo fanova maro ireo sy ny fanolorana "lahatsoratra voasedran' ny fitsikerana" izay afaka misolo ny lahatsoratra fototra amin' ny alalan' ny fanazavana tsaratsara kokoa ny toetran' ny lahatsoratra ananana.
Ny fitsikeran-doharano[hanova | hanova ny fango]
I Julius Wellhausen
Arakaraka ny antony nanoratana ilay lahatsoratra no amaritan' ny fitsikerana loharano ny indrana isankarazany tamin' ny literatiora tao amin' ny faritra na firenena manodidina. Faritany ny toerana sy ny fiarahamonina namokatra ilay lahatsoratra izay matetika ny an'ny mpanoratra. Ohatra mazava ny amin' izany ny petrakevitra momba ny loharano Q izay heverina fa isan' ny loharano nakana ny lahatsoratr' ireo Filazantsana na Evanjely sinôptika.
Ny tsikera ara-tantara sy ara-kaisoratra[hanova | hanova ny fango]
Ny fitsikerana endri-dahatsoratra[hanova | hanova ny fango]
I Rudolf Bultmann (1884–1976)
Ny fitsikerana ny endrika (Formgeschichte) dia mandinika ny lahatsoratra mifandraika amin' ny sokajin' ny literatiora.
Ho an' ny lahatsoratra misy votoaty ara-tantara misy vahoaka roa, dia nandinika izay lazain' ny tantaran' ny vahoaka hafa momba ny zava-nitranga iray izy. Ohatra, ny fandripahana ny tsy manan-tsiny dia notantarain’ ny Filazantsara araka an’ i Matio amin’ ny firesahana momba ny fandripahana zaza iray hafa, dia ny fandripahana ireo zazalahy vao teraka tamin’ ny Zanak’ i Isiraely nataon’ i Farao izay taterina ao amin’ ny Testamenta Taloha (Eksodosy 1,16 ). Ny fitantaran’ i Matio dia mifanitsy amin’ ny nahaterahan’ i Mosesy ao amin’ ny Testamenta Taloha, amin’ ny ezaka fanoharana hanehoana fa i Jesoa no Mosesy vaovao. Ny fitoviana lehibe misy eo amin’ ireo fitantarana roa ireo dia nahatonga ny teôlôjiana sasany, indrindra i André Gounelle, hihevitra fa “mavesa-danja loatra ny fitoviana ka hatao hoe tsy noforonina, raha tsy hatramin’ ny antsipiriany, fara faharatsiny amin’ ny ankapobeny”. Misy àry ny mpitsikera mihevitra fa tsy misy fototra ara-tantara io fisehoan-javatra io. Ny karazana literatiora ampiasaina eto dia nahazatra tamin' izany fotoana izany ary hita ao amin' ny andalan-tsoratra maro hafa ao amin' ny Filazantsara ny toy izany.
Ny fitsikeram-pampandriana an-tsoratra[hanova | hanova ny fango]
Ny Redaktionsgeschichte, na fitsikeram-pampandriana an-tsoratra, dia mandinika ny asan' ny mpanoratra ao amin' ny Baiboly, izay heverina ho "mpamoaka" ny fitaovana fitantarana eo aloha. Ity fomba fanadhadiana ity dia novolavolaina mifanaraka amin' ny Formgeschichte.
Ny fitsikeran-drafi-pitantarana sy fandaharan-teny[hanova | hanova ny fango]
Ny Kardinaly Albert Vanhoye
Heveriny ao anatin' ny fitantarana na firafitry ny lahateny ny lahatsoratra araka ny nahatongavany eto amintsika ary manasongadina ireo andalana fototra ao aminy. Ny zava-misy manodidina izay tsy maintsy dinihina dia ny toerana nahaterahan' ny lahatsoratra, ity vakiteny ity koa dia mandray ny lahatsoratra araka ny maha-kanônika azy ary miezaka ny hamantatra ny hermeneotika azy amin' ny fomba "ny Baiboly dia hazavain' ny Baiboly". Amin' ny ankamaroan' ny fotoana dia mitondra any amin' ny famakafakana kanônika izany.
Ny tapany faharoa tamin' ny taonjato faha-20 dia nahitana ny fivoaran' ny famakafakana ny fandaharan-teny semitika teo amin' ireo mpandalina katôlika nanaraka an' i Marcel Jousse: anisan' izany i Albert Vanhoye, i Paul Beauchamp ary i Roland Meynet. Nanomboka tamin' ny taona 2008 ity sehatra famakafakana ity dia nampivondrona fikambanana mpikaroka maromaro. Ny foto-kevitra fototra dia ny hoe ny fandaharan-teny ara-Baiboly sy semitika dia miavaka amin' ny alalan' ny zavatra tsy miovaova maromaro, indrindra ireo lahatsoratra natsangana araka ny foto-kevitry ny fifanandrifiana, amin' ny endrika firaizotra, ny fifampitarafana na kiasma aza.
I Raymond E. Brown, ao amin’ ny Croire en la Bible à l’heure de l’exégèse, dia mamaly ny fanoherana nentim-paharazana manohitra ny teôlôjia sy ny famakafakana, izay lazain’ ny mpitsikera fa mitarika ho amin’ ny fahaverezan’ ny finoana. Mampidi-doza ve ny manam-pahaizana ara-Baiboly? Ho fahavalon’ ny Eglizy Katôlika ve izy ireo na ho fahavalon’ ny Fiangonana efa niorina rehetra? Ny mpanoratra dia mikasa ny hampitsahatra ny ahiahin' ny fondamentalista. Mifandray amin’ ny Dei Verbum ao amin’ ny Kônsily Vatikana II, i Brown dia mampivelatra ny fisaintsainany amin’ ny fanamafisana ny asan’ ireo mpanoratra ny Soratra Masina, sy ny hevitra mety horaisin’ ireo andinin-teny ireo, dia hevitra tsy mitovy amin’ izay omen' ny mpamaky amin’ izao fotoana izao: “Tsy ratsy raha aorina ny fifandraisam-pihenjanana eo amin’ izay tian’ ny Soratra Masina holazaina ho an’ ny mpanoratra azy sy ny dikan’ izany ankehitriny ao amin’ ny Fiangonana” (izany hoe Katôlika).
Ny eveka episkopaliana John Shelby Spong dia manandrana mikaroka endrika famakafakana avy amin' ny tantaran' ny endrika amin' ny fanamafisana ny andraikitry ny Midrasa amin' ny fanoratana ny Baiboly.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Famakafakana_ny_Baiboly&oldid=1042807"
Voaova farany tamin'ny 8 Janoary 2022 amin'ny 18:49 ity pejy ity.